Madaxweyne Faroole iyo xubno ka tirsan dowladda Puntland oo gaaray magaalada Brussels ee Beljium – Radio Daljir
Seteembar 15, 2013 2:55 b 0
Dubai, September 15, 2013 – Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka ayaa gaaray magaalada Brussels ee dalka Beljium, halkaas oo uu beri ka furmayo shirka qaban-qaabadiisu socoto ee ee New Deal.
Madaxweyne Faroole iyo wefdiga la socda ayaa ka duulay magaalada Dubia ee dalka isu-taga Emarat-ka Carabta (UAE), waxaana Puntland casumaad gooni ah ay ka heshay midowga Yurub oo qaban-qaabinayey shirka.
Wefdiga Puntland ee gaaray Brussels ?waxaa soo dhoweeyey xubno sar sare ee midowga Yurub ka tirsan, sida wakiilka midowga ee Soomaaliya Michele Cervone d’Urso,??wararka aan helayno waxay sheegayaan in safarka madaxweynaha ay ku weheliyaan, Wasiirka caafimaadka Puntland Cali cabdulaahi warsame iyo weliba xubno kale oo la shaacin.
Xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ayaa go?an, waxaana taas bedelkeedaa midowga Yurub ay si gooni ah Puntland ugu casumeen shirka New Deal, kaas oo dib loogu eegayo habka ugu fudud ee looga qeyb-qaadan karo dhismihii Qaranka Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha Jubba Axmed Maxamed Islaan iyo wufuud ay hugaaminayaan ayaa shalay ilaa xalay u duulay Brussels, shirka ayaa la filayaa in uu beri furmo waxaana haatan socota qaban-qaabadiisa.
Shirkada SKA oo dhowr sano kadib maanta wareejinaysa gacan ku haynta garoonka Aadan cade